ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် ThuDathana Street (သုဒဿနလမ်း), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - ThuDathana Street (သုဒဿနလမ်း)
*Location – Thu Da Thana Street, Thingangyun Township.
*Price – 330 Lakhs
*Property Type — Apartment(6F)
*Area — 900 sqft
*Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Thingangyun Township.
Property ID: S-1186240
အိမ်ခြံမြေ အမည် : ThuDathana Street (သုဒဿနလမ်း)
ThuDathana Street (သုဒဿနလမ်း)
Code-8371 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ထပ်ခိုးအပြည့်ပါ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8484 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8483 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8479 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8478 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ 5လွှာ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8477 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းအားရောင်းရန်၇ှိပါသည်။
Code-8476 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8539 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ထပ်ခိုးပါ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်ရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ဇေယျာသီရိလမ်းတွင် (18*55)ပေကျယ်သော 2Floor တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
Code-8321 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Apartment Rent in Thingangyun (ID-286)
Code-8312 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8303 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် 633 ပေ အကျယ်ရှိ တတိယထပ်တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8304 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း၇ှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8305 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8299 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိအမြင့် 19ပေ ရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8296 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8264 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Code-8262 သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Htet Aung Shine Real Estate
Htet Aung Shine Real…
ဖုန်းဆက်ရန် 01209310, 01209311
ဖုန်းဆက်ရန်09443086254, 09443033261, 09798424739
Advertiser : Htet Aung Shine Real Estate
အမှတ်(၃၁၄) မြေညီထပ်၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Shweproperty ID: S-1186240
Asking Price : 330 သိန်း
Mobile : 09443086254, 09443033261, 09798424739
Office No : 01209310, 01209311